Uyenza njani iMiboniso eNqabileyo yamabali e-Instagram | Martech Zone
Uyenza njani iMiboniso eNqabileyo yamabali e-Instagram
NgoLwesihlanu, Septemba 18, 2020 NgoMgqibelo, Septemba 19, 2020 UHardik Oza
I-Instagram inabasebenzisi abangaphezu kwezigidi ezingama-500 ezisebenzayo yonke imihla, oko kuthetha ukuba ubuncinci isiqingatha sesiseko somsebenzisi kwi-Instagram yokujonga okanye ukudala amabali yonke imihla. Amabali e-Instagram aphakathi kweyona ndlela unokuyisebenzisa ukunxibelelana nabaphulaphuli bakho ojolise kubo ngenxa yeempawu ezintle ezingasoloko ziguquka. Ngokwezibalo, iipesenti ezingama-68 zewaka leminyaka zithi babukela amabali e-Instagram.
Ngenani eliphezulu labasebenzisi abalandela abahlobo, abadumileyo, kunye neshishini, sinokucinga ukuba abasebenzisi abaninzi basebenzisa umxholo omninzi weshishini nayo yonke enye into ebonelelwa liqonga. Ukuqhagamshela kunye nokutsala abaphulaphuli bakho, kufuneka yenza amabali e-Instagram athandekayo ezime ngamehlo. Nazi iingcebiso ezisibhozo zoyilo ezinokukunceda ukuba wenze ubumnandi ngakumbi, ubonakale umangalisa, kwaye ubandakanye amabali e-Instagram.
Sebenzisa iiMifanekiso eziHlalisiweyo
Ngokwezibalo, iiposti zevidiyo zihlala zifumana ukuzibandakanya okungaphezulu kwama-38 epesenti ngokuthelekiswa nemifanekiso. Ke ngoko, ukuba uyasilela ukuthimba abaphulaphuli bakho kwimizuzwana yokuqala yokujonga, unokulahla ngokupheleleyo umdla wabo. Yongeza oopopayi kwimifanekiso yakho yenye yeendlela ezilungileyo zokubandakanya ukuhamba kunye nokugcina ababukeli bakho bezibandakanya.
Nangona kunjalo, ukuba awunawo umxholo wevidiyo, unokongeza oopopayi kwimifanekiso yakho okanye wenze oopopayi abahlukileyo. I-Instagram ibandakanya izixhobo ezakhelweyo ongazisebenzisa, ezinjengegalari ye-GIF engenamda okanye amazwi aphilayo. Ngapha koko, unokusebenzisa umntu wesithathu Izixhobo ze-Instagram zezona ziphumo zibalaseleyo kumajelo asekuhlaleni.
Yenza iBhodi yamanqaku
Ungasebenzisa amabali e-Instagram ngeendlela ezininzi ezahlukeneyo. Ukusuka ekwabelaneni ngezinto ezintsha ukukhuthaza iibhlog zakho ezintsha, la mabali akunika indlela engummangaliso yokuzibandakanya kunye nemarike yakho ojolise kuyo ngaphandle kokuyipolisha njengokutya kwakho. Oko kuthetha ukuba ungathatha imifanekiso esecaleni kwemifanekiso, iifoto ze-smartphone, kwaye uphile iividiyo ngaphandle kokukhathazeka nokuba iyahambelana nomnye umxholo onawo. Nangona kunjalo, xa kuziwa kwimizobo yamabali akho e-Instagram, kuya kufuneka uqiniseke ukuba uyila uyilo olubonakalayo olunomtsalane kubaphulaphuli bakho ukuba balungele. Enye yeendlela ezilungileyo zokufezekisa oko kukusebenzisa ibhodi yamabali ukucwangcisa amabali akho ngaphambi kokuba uqalise kuyilo.
Ibhodi yamabali ikunceda ucwangcise umxholo ofanelekileyo ukuba uwuthumele kwaye uququzelele umxholo ngendlela obungathanda ukuba uboniswe ngayo. Oko kuyanceda ekuqinisekiseni ukuba ibali lakho le-Instagram lihamba kakuhle kwaye ligcina ababukeli bakho bezibandakanya. Ibhodi yamabali ikwabalulekile ukuba uhlala ubeka isicatshulwa kumabali akho kuba iqinisekisa ukuba amabali akho ahlala emanyene.
Ibali lakho le-Instagram akufuneki libandakanye uyilo lwegraphic yesiko kuphela. Ungazitshintsha kwaye ubandakanye ukufota ngamanye amaxesha. Eyona nto intle malunga namabali e-Instagram kukuba yonke into oyipapashayo ayifanelanga ukuba yenziwe ngobungcali okanye ibe kumgangatho ophezulu. Endaweni yoko unokusebenzisa ikhamera ye-smartphone yakho ukuthatha iifoto ngasemva kwesikrini kwisicelo. Ngaphaya koko, kukho izigidi zeenketho zokufota simahla ezifumanekayo ukuze zisetyenziswe nazo. Kufuneka ukhethe kuphela iifoto ezihambelana nomxholo owabelana ngawo kwaye zichaphazeleka kwinkampani yakho okanye uphawu.
Sebenzisa imibala yakho yebrand kunye nefonti
Xa uthengisa inkampani yakho okanye iimveliso, kuya kufuneka ugcine yonke into oyiphuhlisayo kwibhrendi, kubandakanya namabali akho e-Instagram. Ke ngoko, kufuneka ube nefayile ye- gcwalisa ikhithi yohlobo lophawu olulungele onke amaxesha ukuhamba nelogo yakho, iifonti, kunye neekhowudi zehex, phakathi kwezinye izinto. Ukubandakanya imibala yakho yohlobo kunye neefonti zinceda kakhulu ekuqondeni uphawu, ngakumbi xa abaphulaphuli bakho behamba ngamabali. Ukuncamathela kumbala othile wombala kuwo onke amabali akho e-Instagram kubalulekile ekukhuleni kokukhumbula uphawu. Nokuba uyakha i-brand yakho, okanye uneshishini, ukugcina iskimu sombala wakho kungangqinelani kubalulekile. Sebenzisa iphalethi yombala ngobulumko nangobungcali ukonyusa ukubonakala kweempawu zakho zamabali e-Instagram. Nje ukuba ababukeli bakho babone imizobo yakho, banokwazi ngokuzenzekelayo ukuba yeyombutho wakho ngaphandle kokubona igama lakho lomsebenzisi.
Kuya kufuneka uyile kunye nee-asethi zoyilo ezingaphakathi nohlelo ezinikezwe yi-Instagram ukwenza ukubonwa okuthandekayo kuwo onke amabali akho e-Instagram. Ungabandakanya izithunzi zesicatshulwa kwideshibhodi yokudala ibali ngokubandakanya imibala emibini yemibala eyahlukeneyo kwisicatshulwa esinye. Ungayiphumeza loo nto ngokuchwetheza isicatshulwa sakho kwindawo emnyama okanye elula kwaye uyibeke ngaphezulu kwesithunzi usebenzisa i-engile encinci. Le ngcebiso yindlela enomdla yokongeza isicatshulwa ngaphezulu kwevidiyo okanye ifoto oyifakileyo kwisicelo, isenza ukuba kube lula kwaye sikhawuleze ukwenza ibali lakho le-Instagram ngaphambi kokulipapasha.
Yenza iMigqaliselo kunye neMvelaphi
Isixhobo sokuzoba esibonelelwe yinkqubo ye-Instagram sinokwenza ngaphezulu kokuqaqambisa kunye nokufaka imibala kwibali lakho. Esi sixhobo sahlukileyo sinokukunceda ekudaleni imibala eyahlukileyo kunye nemvelaphi ekhulisa ukubonakala kwamabali akho. Ukuba ucwangcisa ukwabelana ngezibhengezo ezibalulekileyo kwibali lakho le-Instagram ngaphandle kokufumana ifoto oza kuyisebenzisa, unokuvula isixhobo sokubhala, ufumane umbala ongasemva owufunayo kwaye ucofe kwaye ubambe de kube isikrini sonke sijika loo mbala.
Ngapha koko, unokwenza umbala oqaqambileyo ngaphezulu kokusebenzisa isixhobo sokuqaqambisa inkqubo efanayo. Unokwenza ezinye iinyikima ngokufaka umbala ongasemva kwimifanekiso yakho kwaye uhambisa isixhobo sokucima ngaphezulu ukuphelisa eminye imibala kunye nokwenza ngcono imifanekiso yakho. Ukuba ufuna imvelaphi eyenziwe ngobungcali kunye nokulayishwa ungabonisana nabakhi bewebhusayithi abanokukwenzela yona. Unokufumana ulwazi ngakumbi malunga nabo apha, ukuba awuziva ukhululekile ukuyenza ngokwakho.
Sebenzisa ii-GIF kunye neencamathelisi
Amabali e-Instagram akunikezela ngezincamathelisi ezahlukeneyo kunye neenketho ze-GIF zokuzisa isimbo kunye nokuhlekisa kuyilo lwakho. Unokukhangela into ethile okanye uskrole ngeendlela ezahlukeneyo zokongeza kumabali akho e-Instagram. Kukho uluhlu lweendlela ze-icon, kwaye unokubandakanya ii-hashtag stickers, Q & As, imibuzo, kunye neepolls ukonyusa ukubonakala kokubonakalayo kwakho kwaye ugcine abaphulaphuli bakho bezibandakanya. Unokwenza kwaye ungenise ii-GIFs kunye nezitikha zakho kubabukeli ukongeza kumabali abo okanye ukubonelela ngokulula kwi-brand yakho.
Ukwenza amabali e-Instagram ayilayo kunye nokubonakalayo anomdla yinxalenye yeshishini lakho okanye uphawu lomntu. Nokuba ungumfanekiso, umfoti wevidiyo, umfoti, okanye usomashishini oshishino oluncinci, ukwenza amabali amahle kunye nabalaseleyo e-Instagram anokukunceda usasaze umyalezo kwizakhono zakho ezigqibeleleyo kwaye ubonise umsebenzi wakho kubaphulaphuli abakhulu. Iingcebiso ekuxoxwe ngazo ngasentla zinokukunceda ukuba wenze imifanekiso ekumgangatho ophezulu eya kuthi ibangele ababukeli bakho kuwo onke amabali akho e-Instagram.
tags: oopopayi gifii-gifs zoopopayii gifsIingcebiso zokuthengisa nge-instagrammabaliImvelaphi yebali le-instagramUkubaliswa kwebali le-instagramIifonti zebali le-instagramIbali le-Instagram ligubungeleIfoto yebali le-instagramizitikha zebali le-instagraminstagram ibali lezithunziIbhodi yamabali e-instagramIbhodi lebaliimbonakalo
Yeka Ukuhlaziya iminyaka kwiShishini kwiWebhusayithi yakho yeWordPress ngale ndlela imfutshane